Umshini Wokufaka i-Glue Labelling ngokuzenzakalela - Micvd.com
Umshini wethu wokufaka ilebula le-glue uzimele geqe ngokuya ngezidingo zeklayenti. Ngokuvamile lo mshini ungowezinhlobonhlobo ezijikelezayo. Ibhodlela elizofakwa ilebuli libekwa endaweni yalo ebekiwe futhi ligijinyiswe ukuze istikha esigoqekile esizungezile sisetshenziswe.
Iziqukathi eziyindilinga ezibekwe ngokunembile yisibungu sokuphakela umsebenzi wokugoqa endaweni yokulebula, isilinda seglue esijikelezayo sithola i-glue ebandayo kusuka ku-gluepot ethi idluliselwe ku-Glue Rubber Roller. Ekugcineni kudluliswa ifilimu elincane, elincane futhi elincane lengcina. Isiqukathi esiyindilinga esihambayo esihambayo ku-feed worm senza ukulandelana, okuholela ekususweni kwebhokisi lelebula. Umphathi welebula ojikelezayo uqondaniswe ngosizo lokuqoqa iminwe f rom the label master & nge-oscillating Label Box. I-pick up cylinder ithola amalebuli ngosizo lokuthatha iminwe enkosini yelebula. Isilinda sokuthwala siphethe amalebula ngokuphelele ngenxa ye-vacuum ngesikhathi sokuhamba kwayo kokujikeleza. Ngasikhathi sinye iminwe yokulanda ihamba ngaphakathi, Isitsha esiyindilinga sihamba ngokuthutha ngosizo lwesibungu kanye nelebuli ethe njo kusilinda wokuqoqa ogoqelwe esitsheni ngenxa yamabhande wokuhlubula. Isitsha esinelebula siqhubekela phambili ngebhande lokucindezela irabha & okumile iphedi yenjoloba eqinisekisa ukuhleleka nokulungiswa okuhle kwelebula.
Umshini Wokufaka i-Glue Lablue Automatic Machine
Umshini wokufaka ilebula weglue othomathikhi ukhiqizwa ngu NPACK kwebhodlela eliyindilinga nge-glue eshisayo, Umshini Welebula Ye-Hot Melt Glue OPP. I-glue eshisayo inganamathisela umkhawulo welebula ezimbili.
I-automation ejwayelekile futhi ilawula ukusetshenziswa kwe-PLC control, uhlelo lwe-servo, uhlelo lwe-inverter, amasistimu wokulawula amazinga okushisa nezinye izidingo ngokulawulwa okuphelele kwephuzu.
Umshini wokubhalwa kwe-glue we-othomathikhi we-othomathikhi wenzelwe umshini webhodlela ophuzayo ngelebula eliphikisayo yi-glue encibilikisiwe / eshisayo, ye-automatic round ye-hot melt glue lolo uhlobo uhlobo. ijubane lingakhipha umshini wokulembisa we-glue wehora oshisayo wehora.
1 ukusebenza okulula ukulungisa ilebula ukusika ummese
Umshini wesigubhu owenziwe ngezinto eziqinile ukuze unciphise ukungqubuzana nokumile
Izinguquko ezisheshayo eziyi-3: ukwakheka kwe-modular kanye nezingxenye zokukhishwa ezisheshayo zinoshintsho olusheshayo nolulula ngemizuzu eyishumi
4 Ukusebenzisa isibambo ukulungisa indawo yokusika ummese kungenzeka futhi ncamashi
5 Veza kaningi engxenyeni engezansi yesigubhu nomsiki, okwenziwe ngokushisa nokugqoka okokuvikela
Isilawuli sobude belebula esizenzakalelayo ukulungisa isimo se-I-MARK
imodeli I-NP-HGL umshini wokubhalwa kwe-glue othomathikhi
Umthamo webhodlela ofanele I-500ml-750ml
Isimo sebhodlela Ibhodlela eliyindilinga
Ububanzi bebhodlela: 55mm-70mm
Lebula ngqo: 2mm
Izinto ezisetshenziswayo zelebula I-PAPER, PP, BOPP, PVC, PE, ETC
Izinto ezisetshenziswayo zebhodlela I-Pe, i-PET, Ibhodlela le-Glass, i-POP Can
Power I-308 VOLTS, ISI-3 SESIKHATHI, 50-60 HZ, 9 -12 KW
Ukusetshenziswa komoya 4Mpa
Isisindo I-1500 Kg
Ubukhulu bomshini I-L5000 × W1800 × H2000 mm
1 Imishini yokuphepha esetshenziselwa ngokweqile egxunyekwe endaweni yokushayela
2 IStopper sokusebenza okungajwayelekile kwesondo lezinkanyezi ezingaphakathi kokuphakelayo
Ukugcwala ngokweqile okungu-3 kokuphakelwa ibhodlela (isheke lenzwa)
4 alikho ibhodlela elingenawo amalebula
Umshini Wokufaka Umshini Womugqa Obandayo
Cold Glue Labeling Machine kukhiqizwa NPACK, ikhethekile ngelebula lephepha lebhodlela eliyindilinga, amathini, izimbiza nge-glue emanzi / ebandayo, i-glue iyi-glue resin
Ibhodlela le-othomathikhi le-Wet Glue Can Machine Labeling, umshini wokufaka othomathikhi oyindilinga omanzi.
ICold Glue Labeling Machine yakhelwe ilebula lephepha le-Cans, Izimbiza, Ibhodlela nezinye izinhlobo zesitsha esiyindilinga. Amakhasimende afaka amalebula ebhokisini lelebuli, bese kuthi glue emanzi yiglue resin. Kungenxa yomkhakha wokudla, uMkhakha wamakhemikhali. Umshini wokufaka ilebhu we-othomathikhi we-Wet Glue Bottery / Laber.
1 Nge-seperate bottle screw auger
2 Usayizi welebula ibhokisi ungashintshwa ngokuya ngosayizi ohlukile welebula.
Isebenzisa iphampu yeglue futhi i-glue ingasetshenziswa isiyingi
4 Qhathanisa namalebula wokunamathisela, ilebula lephepha lenza izindleko eziphansi
imodeli Umshini Wokufaka i-Clue Glue Lablue Machine
HLELA I-Shift motor eqhutshwa
I-BOTTLE DIAMETER Ф55-110mm
BOTTLE Height I-60-450mm
UKUSHUMAYELA KHULUMA I-50-120pcs / iminithi
LABELSIZE Ububanzi: 20-220mm Ubude: 80-370mm
ISINQUMO ± 1mm
IMISHINI SIZE 2400 * 824 * 1100mm
AMANDLA AC 220V / 380V 50 / 60HZ 750W
1 Ubungako beglue egobhozayo nayo ingashintshwa ukuze yanelise ukufaka ilebula ehlukile.
2 Shit motor umshayeli
3 ilebuli yamaphepha ne-resin glue ishibhile kakhulu kunelebula elinamathelayo
4 Noma yiziphi izinhlobo zeziqukathi eziyindilinga ezinelebuli yephepha ngeglue ebandayo